> Resource> égwu> Olee otú iji hazie Android égwu
Na nza nke ngwa ọdịnala na gị Android ekwentị ma ọ bụ na tebụl, ọ pụrụ ịbụ ike ka i ngwa ngwa ahụ gị chọrọ n'anya. Ka njọ, na obere Android n'ụlọ ihuenyo nwekwara blocks ị iji hazie Android apps kpam kpam. Ọ bụrụ na ọ annoys ị a otutu, ị nwere ozi ọma ebe a. Nke ahụ bụ isiokwu a ga-egosi gị a dị ike Android njikwa aha ya bụ Wondershare MobileGo for Android (n'ihi na windows ọrụ). Na ngwá ọrụ a, ị nwere ike kpamkpam ibudata, wụnye, uninstall, mbupụ, na ọbụna ịkọrọ Android ngwa.
Dị ka a Mac njirimara, i nwere ike ịjụ enyemaka si Wondershare MobileGo for Android Pro (Mac). Ọ na-enye gị ohere iji wụnye, uninstall na nkwado ndabere Android ngwa mfe.
Download a Android njikwa na-agbalị na-ahazi Android ngwa.
Ma nsụgharị nke a Android njikwa arụ ọrụ nke ọma. Download nri onye. Ebe a, ayak 'na-agbalị Wondershare MobileGo for Android iji hazie ngwa ọdịnala na Android ngwaọrụ.
Cheta na: Na Wondershare MobileGo for Android, ị nwere ike hazie ngwa ọdịnala na multiple Android smart ntị na mbadamba, dị ka Samsung, HTC na LG. Ego ọzọ Android ngwaọrụ na zuru ezu Ama banyere nke a Android njikwa.
Na-agba ọsọ a Android Manager na melite gị Android ngwaọrụ
Nke mbụ niile, wụnye na-agba ọsọ a Android faili na kọmputa gị na-agba ọsọ Windows os. Jikọọ gị android ngwaọrụ na kọmputa ma site na eriri USB ma ọ bụ site WiFi. WiFi bụ naanị ike ga-eji mgbe ị na-eji Windows mbipute a ngwá ọrụ. Mgbe ahụ, ị ​​ga-esi isi window ka screenshot-egosi n'okpuru.
Download Android ngwa site Google Play
Otu salient atụmatụ nke ngwá ọrụ a bụ na ị pụrụ ozugbo download Android ngwa site ngwa echekwa, dị ka Google Play. Ma ọ bụ, i nwere ike tinye ọkacha mmasị gị ngwa weebụsaịtị-ekpe kọlụm. Pịa Cross na n'elu aka ekpe kọlụm. Na mmapụta elu window, pịnyere ngwa website aha na URL.
Chọọ na ibudata gị chọrọ ngwa. Ndị a ngwa ọdịnala ga na--arụnyere na gị gam akporo ngwaọrụ na-azọpụta na kọmputa gị.
Wụnye ngwa gị gam akporo ngwaọrụ
Ọ bụrụ na ị zọpụta ọtụtụ kediegwu ngwa ọdịnala na kọmputa gị, ị nwere ike iwunye ha gị Android ngwaọrụ. Na-ekpe kọlụm, pịa "égwu" iji bugote ngwa window. Pịa "Wụnye". Mgbe ndọpụta faịlụ nchọgharị windo na-egosi, ịnyagharịa ebe ngwa ọdịnala na-echekwa. Họrọ gị chọrọ ngwa ọdịnala na wụnye ha gị Android ngwaọrụ.
Uninstall Android ngwa
Na nke a Android njikwa, ị nwere ike ngwa ngwa ahụ gị na-achọghị ngwa ọdịnala na iwepụ ha. Họrọ ngwa. Pịa "Uninstall" na "Ee" wepụ Android ngwa.
Export Android égwu N'ihi ndabere
Nkwado ndabere na mpaghara android ngwa gị PC, ị nwere ike pịa "Export" mgbe ị na-ahọrọ gị chọrọ ngwa. Mee a zọpụta ụzọ na-echekwa ngwa.
Share Android apps n'etiti ndị enyi na ezinụlọ
Nke a Android njikwa na-enye gị ohere ịkọrọ ọkacha mmasị gị ngwa ọdịnala na ndị enyi gị na ezinụlọ. Họrọ ngwa na ị na-ekpebi na-egosi. Na nri ga-apụta 3 nhọrọ. Pịa 3rd akara ngosi. Na esiri-ala ndepụta, họrọ otu si "Share ka Facebook", "Share ka Twitter" na "Share site SMS" ịkekọrịta ngwa.
Cheta na: The ngwa ebudatara nwere ike na-akọrọ na uninstalled. Ọ bụrụ na gị Android ngwaọrụ sitere, ị nwekwara ike iwepụ tupu ngwa ọdịnala na ya.